‘मालिक’ ले ढाले शालिक - Jhilko
‘मालिक’ ले ढाले शालिक
काठमाडौं । एउटा फेटा ओढेको शालिक डङ्रङ्ग उत्तानो परेर लडेको छ । शालिक लडेसँगै इतिहास पनि लडेको भान हुन्छ । त्यो ढलेको केवल फलाम होइन । त्यो केवल टोपी, कोट र हातको कागज अनि दौरा मात्र पनि होइन ।
यो ढलेको शालिक हो पूर्व राजा त्रिभुवनको । हामी अझै पनि लोकसेवा आयोगको जागिर खानका तयारी गर्नु पर्दा सामान्य ज्ञानका पुस्तकहरुमा र विद्यालयका कोर्शमा अनि इतिहासका पानाहरुमा एउटा प्रश्न भेट्छौं, नेपालमा कसले प्रजातन्त्र ल्याएका हुन् ? त्यसको उत्तर भेटिन्छ, ‘राजा त्रिभुवनले’ ।
२०५२ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनले देशमा निरंकुश राजतन्त्र त ढाल्यो तर अहिलेका टोल टोलका, गल्ली गल्लीका र गाउँगाउँका छोटे राजाहरुले शासन चलाइरहेका छन् । लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा देश प्रवेश गरेको पनि एक दशक पूरा भइसकेको छ । तर गणतन्त्रको नाममा इतिहास मेट्ने दुस्प्रयासहरु पनि उत्तिकै भइरहेका छन् । केही सीमित मालिकहरु शालिकसँग पौठेजोरी खेलिरहेका छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो काठमाडौंको थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कमा रहेको पूर्व राजा त्रिभुवनको शालिक ढल्नु र वर्षौ भइसक्दा पनि नठड्याइनु । आर्थिक अभावको निहुँमा एउटा इतिहास धुलाम्यै भुईँमा ढलेर नामेट हुन लाग्दा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसको निर्माणका लागि ध्यान नदिँदा त्रिभुवन पार्कमा पुग्ने जो कसैको मन अमिलो हुन्छ । दैनिकजसो बनभोज खान जाने र घुम्न जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु पूर्व राजाको ढलेको शालिक देख्दा निकै आश्चर्यमा पर्ने गरेको र दुःिखत हुने गरेको स्थानीय गोपाल खड्काले बताए । उनका अनुसार यो शालिक २०७२ सालको भूकम्पपछि यसैगरी बेवारिसे अवस्थामा लडिरहेको छ ।
इतिहास अनुसार २०११ सालमा राजा त्रिभुवनको मृत्युपश्चात श्रद्धाञ्जली दिन आउने आम सर्वसाधारणको घुइँचो टुँडिखेलमा लागेको थियो । तत्कालीन समयमा सबैले राजाको सम्झना स्वरूप एउटा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखे । सबैको प्रस्तावस्वरुप ‘श्री ५ त्रिभुवन स्मारक समिति’ गठन भयो । त्यो समितिले राजाको सम्झनामा कुनै उल्लेखनीय काम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यसलाई मूर्त रूप दिन राजाको सम्झना गर्दै थानकोटमा त्रिभुवन पार्क बनाउने निर्णय भएको थियो ।
हामी ‘लोकतन्त्रको बिकल्प झन बढी लोकतन्त्र हो’ भनी हरेक दिन नेता र मन्त्रीहरको भाषण सुनिरहेका छौं । लोकतन्त्रमा कसैको इतिहास नामेट पार्ने अधिकार कसैलाई पनि दिइएको छैन । न त यो अधिकार नयाँ संविधानले दिएको छ ।
२०६५ साल अघिसम्म यो पार्क सञ्चालक समितिको नाम ‘श्री ५ त्रिभुवन स्मारक समिति’ थियो । २०६५ मा तत्कालीन नाम (श्री ५ त्रिभुवन स्मारक समिति) परिवर्तन गरी ‘सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान’ राखिएको हो ।
सायद पार्कको नाम फेरिएका कारण लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा त्यहाँ पूर्व राजा त्रिभुवनको शालिक राख्न नपाइने भएको हो कि ? यदि त्यस्तै हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सिंहदरबारको मूल गेट अगाडिको पूर्व राजा पृथ्वी नारायण शाहको शालिक हटाउनुका साथै हरेक इतिहास, पाठ्यपुस्तक र लोकसेवाको परिक्षामासमेत पूर्व राजा, राणा, पञ्चहरुका बारेमा पनि केही लेख्न र सोध्न नैं नपाइने किसिमको नियम बन्ने पो हो कि ?
चीनले नेपाललाई निम्तोसम्म गरेन
नेपालको दक्षिणी सीमासँग जोडिएर रहेको भारतीय प्रान्त बिहारमा लिची खाएर २४ घन्टामा...
बालीको समुद्री तटमा साम्राज्ञीको विकिनी सौन्दर्य (तस्वीरसहित)
बालीको समुद्री तटमा उनी आफ्नो जवानी घाममा सुकाउँदै छिन् । 'विच'मा पुगेकी साम्राज्ञी...
कोरोना भाइरसको माहामारी अहिले नै विश्वभर सामना गरेको होइन...
चीनबाट सुरू भै विश्वका करिब दुई दर्जन मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले...
प्रदेश २ मा कोरोनाको जोखिम बढ्दै
भाइरस दिउँसो मात्रै सर्ने होइन, विहान र बेलुकाको समयमा पनि सर्नसक्ने हो, त्यसैले...